विनासको नजिक छ मानव प्रजाति ! « Nepali Digital Newspaper
भूगर्भविद्का अनुशार २.४ अर्ब वर्ष पहिलेदेखि नै पृथ्वीमा क्रमशः अक्सिजन बढ्न थालेको हो । जसले गर्दा पृथ्वीका जमिन र समुद्रहरूमा जीव विकासको लागि पर्याप्त अक्सिजन जम्मा भयो । अक्सिजन उत्पादनको त्यो काललाई जीव वैज्ञानिकहरूले अक्सिजन क्रान्ति काल भनेका छन् । त्यहि अक्सिजनले पृथ्वीको वायुमण्डललाई कमजोर पातलो अस्थिबाट एक अक्सीकरण वातावरणमा परिवर्तन गर्यो । समुद्र र जमिनमा भएका अक्सिजन उत्पादन गर्ने साइनोब्याक्टेरियाले अक्सिकरणको घटनालाई निरन्तरता दियो, जसले बहुकोषीय जीव विकासको प्रक्रियालाई सक्षम बनायो । यसले के देखाउँछ भने पृथ्वीमा जीवानुकुल वातावरण बन्न दुई चार सय वर्षमा सम्भव थिएन, दुईचार हजार वा लाख वर्षमा समेत सम्भव थिएन । पृथ्वीको अहिले जस्तै वातावरण बन्न अर्बभन्दा बढी समय लागेको छ । त्यसैले पृथ्वीको वातावरण ब्रम्हाण्डको दुर्लभ र अनमोल उपहार हो । पृथ्वीको जीवनको विकासवादी इतिहासले ती प्रक्रियाहरू पत्ता लगाएको छ कि जीवित बिरुवा र जीवहरूको उत्पत्ति पृथ्वी बनेको झन्डै २ अर्ब वर्षपछि भएको थियो ।
यी कुराहरूबाट बुझ्नु पर्दछ कि धर्तीको वातावरण यसको आफ्नै प्राकृतिक नियमले टिकेको छ । यो आफैंमा सन्तुलित र जीवानुकुल छ । तर वर्तमान अवस्थामा मानवनिर्मित प्रदुषण र प्रकृतिको दोहनको कारण पृथ्वीको वातावरण विनास हुँदैछ । मानिसले पृथ्वीको जल, जङ्गल र आकास तिनैतिर एकैपटक आक्रमण गरिरहेको छ । यो वातावरण मानवअनुकुल बन्न कति अर्ब वर्ष लाग्यो र यो पृथ्वीबाहेक अनेत्र किन सम्भव छैन ? अब यी प्रश्नबारे गम्भीर नहुने हो भने हाम्रो धर्ति अबको केहि सय वर्षमा बस्न लाएक हुने छैन । त्यसैले अब मानव सभ्यताको नाममा प्रकृतिको बिनास गरेर आफ्नो घरमा आगो लगाउने हाम्रो दुष्कर्मलाई रोक्नुको कुनै विकल्प छैन । समाप्त भएको वायुमण्डलको पुनर्जीवन सम्भव छैन । सुधार पनि दुई–चार वर्षमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले हाम्रा सोच्ने तरिका बदलौँ, पूर्वकर्मको समीक्षा गरौँ र धर्तीलाई आजैबाट मायाँ गरौँ !
धरतीमा एउटा रुख जोगाउनु एक जीव जोगाउनुभन्दा कयौँ गुणा महत्वपूर्ण काम हो, किनकि एक रुखले केही किट तथा केही चरालाई बास दिएर पनि खानको लागि आहारा समेत उपलब्ध गराएको हुन्छ । जीवहरूलाई स्वास फेर्नको लागि अक्सिजन, अन्य बिरुवाको मलको लागि पतिङ्गर दिनु, भूक्षय रोक्नको लागि जमिनको सिलाई गर्नुको साथै वायु–बितण्डा रोक्नको लागि मजबुत सुरक्षा कवचसमेत उपलब्ध गराएको हुन्छ । भविष्यको लागि सयौं लिटर पानि संचय गरेको हुन्छ । त्यसैले रुखको महत्व बहुआयामिक छ । त्यसैले एक रुखको बिरुवालाई आफ्ना सन्तानलाई झैँ माया गरेर हुर्काउनु पर्छ भनिएको हो ।
अब जङ्गल बचाउने महाअभियानमा रुखहरूको महत्वबारे जागरण ल्याउनुपर्छ । एक जीव, एक मानव वा जनावरको एक प्रजातिको रक्षा तब मात्र सम्भव हुन्छ जब वन सुरक्षित हुन्छ ।
जीव रक्षाबारे सोच्नु राम्रो हो, एक मानवलाई बचाउनु सुन्दर कार्य हो, एक रुख बचाउनु अझै परमार्थी कार्य हो । त्यो भन्दा धेरै प्राकृतिक सन्तुलनको लागि जीवको एक प्रजातिको रक्षा गर्नु, सिङ्गो वन तथा जल क्षेत्रको रक्षा र प्रकृतिको सम्मान सृष्टिको दीर्घ जीवनसँग जोडिएर आउँछ । सम्पूर्ण जीव–जगतलाई धारण गरेको धर्तीको प्राणी तथा पर्यावरण जीवनसंग अन्योनाश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । एकले अर्काको बाँच्ने आधार तय गरेको हुन्छ । त्यसैले पृथ्वीको चक्रीय प्रणाली बचाउनको लागि गरिने कार्य अन्य कर्मभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रकृतिप्रदत्त सृष्टिको सुन्दर कलालाई बिग्रन नदिन, धर्तिमा अझै लामो समयसम्म जैविक अस्तित्वलाई सुचारु रुपमा निरन्तरता दिनेबारेमा सोच्ने भनेको विवेकशील प्राणी मानिसले नै हो ।
प्राणवायु अक्सिजन र इकोसिस्टमको लागि वन जङ्गल जस्तै समुन्द्रको पनि अथाह योगदान रहेको हुन्छ । तर धर्तीमा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्ने महासागर, सागर र नदिहरू अहिले घातक रूपले प्रदुषित भइरहेका छन् । भइरहेको प्रदुषणमा सबैभन्दा घातक प्रदुषण प्लास्टिकजन्य प्रदुषण हो । सामुन्द्रिक प्रदुषणलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न देशका वातावरणविदहरूले ब्यापक अध्ययन–अनुसन्धान शुरु गरेका छन् । त्यसै क्रममा गरिएको एक अध्ययनले समुद्रमा रहेको प्लास्टिकजन्य फोहोरको मात्रा आगामी एक दशकमा तेब्बरले बढ्ने देखाएको छ । बेलायती सरकारका लागि तयार पारिएको समुद्रको भविष्यसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्लास्टिकजन्य फोहोरका साथै सामुद्रिक सतहमा आएको वृद्धि, तापक्रममा वृद्धि र अन्य प्रदुषण मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको जनाइएको छ । सम्पूर्ण महासागरमा ५२५ खर्बभन्दा बढी प्लास्टिकका टुक्राहरू छन् भनेर अनुमान गरिएको छ, जसले समुन्द्रलाई विशाल ‘प्लास्टिक सुप’मा परिणत गर्दै लगेको सेटलाइट तस्बिरहरू मार्फत देखिएको छ ।
यो प्रदुषणले समुन्द्रभित्र बाँच्ने सुक्ष्म बिरुवा, लेउ र ब्याक्टोरियासम्म सुर्यको प्रकाश पुग्ने प्रक्रियालाई गम्भीर ढंगले अवरुद्ध पार्छ । सबै बोटबिरुवाहरू जस्तै तिनीहरूले पनि खाना बनाउँदा प्रकाश संश्लेषण गर्दछन् । एउटा जीवविज्ञानको विद्यार्थीलाई थाहा हुने कुरा हो कि ती प्लांक्टनहरूले खाना बनाउन सूर्यको किरण र कार्बनडाइअक्साइड प्रयोग गर्दछन् । उनीहरूले खाना बनाउँदा प्रयोग गरिने प्रकाश संश्लेषणको एक उप–उत्पादन प्राण वायु अक्सिजन ग्याँस हो । वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि फाइटोप्लांक्टनले पृथ्वीको वायुमण्डलमा ५० देखि ८५ प्रतिशत अक्सिजनको उत्पादन गर्छन् ।
सामरिक होड र अस्त्र निर्माण
मानिसले आफूलाई मात्र नभएर धर्तीका सम्पूर्ण निरपराध चराचरलाई सिध्याउने आणविक अस्त्रसमेत निर्माण गरेर अर्को पागलपन देखाइसकेको छ । अहिले मानिसले विद्युत र हतियार आपूर्तिको लागि ४५० न्युक्लियर स्टेशन बनाएका छन् । शक्तिराष्ट्रहरूले १३,८८५ भन्दा बढी आणविक बम यही धर्तीको गर्भमा भण्डारण गरेका छन् । जसमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी अमेरिका र रसियाका छन् । तिनै हतियारहरू मानवीय गल्ती, उत्तेजना वा असावधानीको कारण बिष्फोट भए भने मानव सभ्यता सङ्कटमा पर्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले पनि हामीले युद्धविरोधि अभियानलाई संसारभरी सचेततापूर्वक सञ्चालन गर्नु पर्छ । त्यसमा मानव चेतनाले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । शक्ति राष्ट्रहरू किन युद्ध चाहन्छन् त्यसका अनुचित र मानवता बिरोधि कारणहरूको भण्डाफोर गर्न जरुरी छ । धेरैजसो शक्ति राष्ट्रको युद्ध नाफाको लागि गरिने तथ्यहरूले देखाउँछ । जसबाट उनीहरूले कमजोर राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत साधन लुट्नुको साथै हतियारको ब्यापारबाट नाफा कमाउँछन् । व्यापारीको हातमा सक्ति र सत्ता रहुन्जेल युद्धको अन्त्य सम्भव छैन ।
पृथ्वीमा रहेका मानव प्रजातिलाई बचाउन के गर्नु पर्ला ?
त्यसको एउटै उत्तर हो– संसारका सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण र उपभोग प्रणालीलाई प्रकृति मैत्री बनाउने । त्यसको लागि संसारको स्वार्थी र व्यक्तिवादी राजनैतिक प्रणाली फेरिनु पर्छ । मानव प्रजातिको दीर्घ जीवन र सृष्टिको हितको लागि ब्याक्तिगत नाफा पछाडी र सामुहिक हितको चेतना र विवेक अगाडि आउनुपर्छ । विवेकशील समुदायले सामुहिक हितको चिन्तन गर्ने, प्रकृतिमैत्री र सामुहिक हितको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक प्रणालीको माग गर्दछ । विवेक नै त्यस्तो मनोभाव हो जसले भविष्यको तस्बिर मानिसको अगाडि ल्याइदिन्छ । विवेकले प्रकृतिका स्वचालित नियमहरूलाई सम्मान गर्दै हामीलाई जात धर्म वर्ग भन्दा माथि मानवतासम्म पुऱ्याउँछ । विवेकले नै म, मेरो हित, मेरो स्वास्थ्य, मेरो घर हुँदै क्रमश: परिवारको चिन्ता, त्यो भन्दा पनि माथि समुदाय, देश र धर्तीका सम्पूर्ण मानवको बारेमा सोच्ने बनाइदिन्छ । अर्थात् हामीलाई मानवताको नजिक पुर्‍याइदिन्छ ।
चेतनाको पराकाष्टामा हामी प्राकृतिक स्वतन्त्रता, जीव जगतको बाँच्ने अधिकार र सम्पूर्ण सृष्टिलाई सम्मान गर्ने बिन्दुमा आइपुग्छौँ । सबै विभेदहरूको अन्त्य भएको बिन्दुबाट नै समुदाय र सृष्टिप्रति समर्पित समभावको सुरुवात हुने हो । चेतनाको विशालतालाई विशेष परिस्थितिमा विवेकले मात्र नाप्न सकिन्छ ।
अरुले जेसुकै भनुन्, आफ्नोबारेमा, आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा, आफ्नो हितको बारेमा मात्रै सोच्नु पनि आफैंमा नराम्रो हैन, परिवार, छिमेकी, एउटै जाति वा समुदायको बारेमा सोच्नु राम्रो हुँदै हो । त्यस्तै कसैले देश वा पृथ्वीका सम्पूर्ण मानवहरूको हितमा चिन्तन गर्नु, उनीहरूको समान प्राकृतिक अधिकारको बारेमा आवाज उठाउनु र आफूलाई झैँ सम्पूर्ण जीव जगतलाई समान महत्व दिनु कति हो कति सुन्दर चिन्तन तथा कर्म हो । चेतनाको तन्काइले सोच्ने क्षेत्रलाई क्रमश: बढाउछ र विवेकलाई फराकिलो बनाउँछ । विवेकको द्वार खुलेपछि मात्र मानवचेतनाले धर्तीमा मानव प्रजातिमात्र एक्लै अस्तित्वमा रहन सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्ने छ । अन्तत: उसमा जीव जगतको सुरक्षा चिन्ता जागृत हुने छ ।
चेतनाको तरङ्गले मानव प्रजातिलाई दीर्घजीवन प्रदान गर्ने प्राकृतिक चक्रिय प्रणालीको महत्वलाई बुझाउन मद्धत गर्छ । बर्तमान अवस्थामा कुन कुराहरू प्राकृतिक वातावरण बचाउन आवस्यक छन् त्यसतर्फ मानिसहरूको ध्यान जान आवश्यक मात्र हैन अनिबार्य छ । आधुनिक मानव चेतनाले बुझ्न आवश्यक छ कि, धर्तीका जल, जङ्गल, आकासको पर्यावरण विनासलाई नरोकेसम्म सृष्टि सुरक्षित हुँदैन । मतलब सृष्टि सुरक्षित नभएसम्म पृथ्वीको विवेकशील मानव प्रजाति पनि सुरक्षित हुँदैन ।
प्रकृति जीवनको भूत, वर्तमान र भविष्य समेत हो । त्यसैले प्रकृतिको नियमलाई बुझ्ने बुझाउने नेतृत्वको पृथ्वीलाई अहिले खाँचो परिरहेको छ । अज्ञानताको अँध्यारो ज्ञान र चेतनाको चिरागले मात्र मेट्न सक्छ । अनि मात्र मानव समुदायले प्रकृतिसंगको आफ्नो अन्तरविरोध र अन्तरसम्बन्ध बुझ्न सक्छ । मानिसमा ज्ञानको वृद्धिसँगै जिज्ञासा र अज्ञानताको क्षेत्र पनि बढ्दै जान्छ । आँफुसंग परिवार, परिवारसंग समुदाय अनि देश र पृथ्वी जोडिए झैँ ज्ञानको विकासले जिज्ञासालाई बढाउँछ, नयाँ समस्या पैदा हुन्छन्, समाधान खोज्दै जान्छ र मान्छे विवेक र सम्वेदनाको पराकाष्टासम्म पुग्दछन् ।
हामी अरुलाई परेको पीडा देख्दा आत्तिन्छौँ । कसैको मृत्युको कल्पनाले मात्रै पनि हाम्रो होसहवास उड्छ । अझ आफन्तको वियोग सहन नसकेर कतिले आत्महत्या गरेको समेत सुनिने, देखिने गरेको छ । यी सबैको निचोड हो– हामी आफन्तका बीच अगाध स्नेहको जेलोले बाँच्न सकेका छौँ । समुदायको आड–भरोसाले हामीलाई सुरक्षाको अनुभूति दिएको छ । परिवारसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आधारमा हामी रमाउन र जिउन सिकेका छौँ । त्यसैले हामीलाई हाम्रो प्राणपछि, परिवार, समाज र सम्पूर्ण मानव समुदायको भरोसा छ । यी सबै सम्बन्धहरू हाम्रालागि अत्यन्त प्रिय छन् । तर हाम्रो परिवार, समाज र सिङ्गो मानव समुदायलाई दीर्घकालसम्म बचाईराख्न प्रेम र सद्भाव मात्र पर्याप्त छ त ? या यो भन्दा पनि महत्वपुर्ण यो सृष्टिलाई सुचारु र सन्तुलित गर्ने कुनै रहस्य छ ? यो नै चुनौतीपूर्ण वर्तमान समयले मानव प्रजातिसँग सोधेको गम्भीर प्रश्न हो । यही महत्वपुर्ण प्रश्नले नै हामीलाई पर्यावरण, प्रकृति र सृष्टिबारे सोच्न बाध्य पार्छ ।
प्रेमले संसारलाई सम्मान गर्दै सजातीय प्रति सम्मान दिन्छ । यो सम्बन्धको कुरा भयो । तर जीव–जगतको अस्तित्वको रक्षा गर्ने मुख्य कुरा भनेको प्राकृतिक अनुकुलता हो । त्यसमा वातावरण, पानी, स्थल र ताप, हावा हुन् । यो कुरा पृथ्वीमा अर्बौ वर्षको रासायनिक प्रक्रियाबाट निर्माण भएको हुन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने प्राकृतिक इन्जिन इको सिष्टम हो ।
अर्को शब्दमा भन्दा इकोसिस्टम भनेको जीवित जीवहरूको एक महान समुदाय हो जुन उनीहरूको वातावरणमा निर्जीव अवयवहरूसँग मिलेर एक प्रणालीको रूपमा अन्तरक्रिया गर्दछ । यी सजीव (बायोटिक) र निर्जीव (एबियोटिक) भागहरू पौष्टिक चक्र र ऊर्जा प्रवाहहरूको माध्यमबाट एकसाथ जोडिएका हुन्छन् । यो प्राणीहरूको बीच, जल र जमिनको बीच, आकाश, जल तथा जमिनको बीच, जङ्गल र जीवबीच, जलचर र स्थलचरबीच र सुर्य, उपग्रह र पृथ्वीको दूरी तथा अन्तरक्रियाबीच सम्बन्धित हुन्छ । यसको सम्बन्धको जेलो तथा प्राकृतिक सन्तुलन बुझ्न धेरै अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ । यसका मानवसिर्जत केही असरहरूलाई तल राखिएको छ ।
जैविक विलुप्तताको असर
बढ्दै गरेको मानव जनसङ्ख्याले पृथ्वीको चक्रीय प्रणाली (ecosystem) लाई चुनौती दिँदै आएको छ । यसको परिणामस्वरूप समय क्रममा जीव–जगतका अन्य प्रजातिहरूको व्यापक र निरन्तर लोप हुँदै गएको पाइन्छ, जसलाई वैज्ञानिकहरूले जैविक विलुप्तता (Holocene extinction) को नामले चिनाउँछन् । मानिसलाई थाहा छ, यो पृथ्वीमा रहेका सबै प्राकृतिक सम्पदाको आफू मात्र हिस्सेदार होइन । उसलाई यो पनि थाहा छ कि पृथ्वीको चक्रीय प्रणाली (ecosystem) भत्कियो भने त्यसले निम्त्याउने दुष्परिणामलाई उसले रोक्न सक्दैन । तर पनि मानिसले केवल शक्ति, बुद्धि र प्रविधिको भरमा प्रकृतिमाथि नियन्त्रण गर्न तम्सेको छ । संसारमा भएका जलचर, उभयचर र थलचर जीवहरूको प्राकृतिक अधिकारलाई चुनौती दिँदा मानव जातिले पनि कुनै दिन डायनासोरहरूको जस्तो अवस्था भोग्न नपर्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पनि मानिसले प्रकृतिप्रदत्त आफ्नो हिस्सा मात्र दाबी गर्नु जायज हो । सृष्टिका अरु जीवात्माको बास खोस्नु, उनीहरूलाई प्राकृतिक रूपमा प्राप्त गाँस, बास र जीवनशैलीलाई मजाक सम्झनु गलत हुने छ ।
धर्तीबाट मेसोजोइक समय वा ‘मिडिल लाइफ’ युगको बेला, जीवनले वेग र विविधताका साथ उत्पत्ति भएका विशाल छेपाराहरू, डायनासोरहरू र अन्य राक्षसी जनावरहरूले आफ्नो साम्राज्यलाई गुमाउन क्षणभर पनि लागेन । उनीहरूले आफ्नो समयमा अन्य कुनै जीवको अस्तित्वलाई चुनौती दिन्थे । तर समयक्रममा प्रकृतिले डायनोसारको सबै प्रजातिलाई समाप्त गरिदियो । त्यो अवधि करिव २२२ मिलियन वर्षअघिदेखि करिव ६६ मिलियन वर्षपहिलेसम्म रहेको मानिन्छ । त्यो मानव सृजित नभएर पृथ्वीको दैविक दुर्घटना थियो ।
शीतयुद्ध कालपछि आधुनिक मानिसले पृथ्वी ध्वस्त पार्ने आणविक अस्त्र बनाएको हो । ती हतियारहरू सृष्टिको लागि खतरापूर्ण छन् । त्यस्तै अर्कोतर्फ औद्योगिकरणले निम्त्याएको वातावरणीय प्रदुषणले विकराल सङ्कटहरू निम्त्याउँदै गैरहेको छ । हामीद्वारा सृजित वातावरण प्रदुषणले पृथ्वीको तापक्रम २.५ डिग्री बढिसकेको छ । त्यसले निम्त्याउने प्राकृतिक दुर्घटना पनि हाम्रो सन्निकट छैन भनेर भन्न सकिन्न, किनकि गोलार्धका हिमपहाडहरू पग्लेर समुन्द्रको उचाई दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । जीवको बासस्थान बन जङ्गल सकिदै गएको छ र दुर्लभ जनावरको चोरी सिकारी बढ्दो छ । विभिन्न कारणले मानिसले पनि प्रकृतिका सबै चराचर जीवका बाँच्न पाउने जैविक अधिकारहरूलाई समाप्त पार्दै लागेको छ । यसले प्रकृतिको इकोसिस्टमलाई असन्तुलित बनाउँदै लागेको छ । जसको कारण मानव सभ्यतालाई चुनौती दिने महामारीहरू आइरहेका छन् । ती सबै जनावरको लोप हुने अवस्थामा जनावरबाट मानिसमा आएको मानिन्छ ।
पृथ्वीको अहिलेको अवस्था प्राणी–जगतको चक्रीय प्रणाली तहसनहस हुनुुपूर्वको अवस्था हो । प्रकृतिको यो महाहानीलाई हामीले जैविक चक्रीय सङ्कट भनेर बुझ्दछौँ । सन् २००७ सम्ममा हामीले संसारमा भएका प्राणीमध्ये करिव प्रजातिको १० प्रतिशत नष्ट गरिसकेका छौँ । धेरै प्राकृतिक स्वभाव थाहा नभएका जीवजन्तु पाल्न घरमा ल्याएका छौँ । अमेरिकामा मात्रै सत्तरी लाख सुगा त्योभन्दा बढी कुकुर, बिराला, मुसा, बाँदर र अन्य जनावरहरू घरमा पालिएको छ । जसमा कुन रोगका जीवाणुहरूको प्रतिरोधी गुण हुन्छ कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । तर रहरकै भरमा मानिसले ति जनावर पाल्दछन् र उनीहरूमा भएका रोग ग्रहण गर्दछन् ।
वर्तमान दरमा नै प्राणीका बासस्थान कब्जा गर्दै र जल, स्थल र आकाश प्रदुषित गर्दै गयौँ भने करिव ३० प्रतिशत प्रजातिहरू अबको सय वर्षमा विलुप्त भइसक्ने छन् । प्राणी–प्रजातिहरूको वंशीय विलोपीकरणको मुख्य जिम्मेदार हामी हौँ । किनकि जल र स्थलमा रहेका जीव–जिवात्माका निवासस्थान हामीले विनाश गर्दै गएका छौँ, दुर्लभ जनावरका प्रजातिहरूको व्यापक रूपमा तस्करी गरेका छौँ, शिकार गरेका छौँ र वातावरण प्रदुषणमार्फत् भएको जलवायु परिवर्तनको परिणामले धेरैथरिका जीव प्रजातिहरूको लोप हुने अवस्था आएको छ । जसको जिम्मेवार केवल हामी हौँ । यो धर्तीमा मानव अन्य प्रजातिमध्ये एक हो र उसको अधिकार अन्य प्रजातिसरह मात्र हो भन्ने कुरा मानवले बिर्संदै गएको देखिन्छ ।
वातावरणविद्हरूको एक अन्वेषणले बताउँछ कि औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएदेखि वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ । त्यो स्वयम् मानव–स्वास्थ्यका लागि कति घातक छ भन्नु नपर्ला । धर्तीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएकोले त्यसले अन्य जीवसहित मानव–स्वास्थ्यमा पनि खतरनाक प्रभाव पार्न थाल्छ । प्राणी जगतको चक्रीय प्रणाली बिग्रनाले फैलिने रोग र जीव जगतमा आउने खतराले समेत बेलाबेलामा मानव सभ्यतालाई चुनौती दिँदै आएको छ । चक्रीय प्रणाली असन्तुलित हुँदा जनावरमा हुने परजीवीहरू मानवमा सङ्क्रमण हुने खतरा अत्याधिक हुन्छ । त्यसैले मानव द्वारा आफूबाट सिर्जित खतरा न्यूनीकरण गर्दा पृथ्वीमा जीव जगतको आयु बढाउन सक्छ । अतः आफूसहित जीव–जगतको सुरक्षाका लागि मानिसले बेलैमा सोच्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।